किन बढ्दैछ हृदयघात? – Health Post Nepal
किन बढ्दैछ हृदयघात?
२०७८ फागुन २१ गते १४:४७
काठमाडौं-प्रख्यात क्रिकेटर शेन वार्नले शुक्रबार बिहान आफ्ना मित्र रोड मार्शको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ट्वीट गरे। ट्वीटमा उनले रोड मार्श क्रिकेटका लिजेन्ड रहेको र थुप्रै युवाका प्रेरणा स्रोत भएको भन्दै श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका थिए। तर शुक्रबार साँझ नै उनको मृत्यु भयो। कारण थियो–हृदयाघात।
हृदयाघातबाट निधन हुनेहरुको सूची बनाउने हो भने निकै लामो हुन्छ।
विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको जीवनशैली परिवर्तनसँगै मुटुरोग मानव मृत्युको पहिलो कारण बन्ने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्यांकअनुसार मुटुजन्य रोगका कारण सन् २०१९ मा १ करोड ७९ लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो। विश्वको कूल मृत्युमध्ये यो रोगबाट मृत्यु हुनेको दर ३२ प्रतिशत रहेको छ। जसमा ८५ प्रतिशत मृत्यु हृदयाघात र स्ट्रोकबाट हुने गरेको छ।
मृत्यु हुनेमध्ये एक तिहाई मानिसहरु न्युन र मध्यम आय भएका मुलुकका हुने गरेका छन्।
यस्तै, अमेरिकी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलका अनुसार अमेरिकामा पनि यो मृत्युको प्रमुख कारक बन्ने गरेको छ। सिडिसीको तथ्यांकअनुसार मुटुजन्य रोगबाट अमेरिकामा हरेक ३६ सेकेण्डमा एक जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने हरेक वर्ष ६ लाख ५९ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ, जुन प्रति ४ मृत्युमा एक जनाको मृत्युको कारण मुटुजन्य रोग हुने गरेको छ।
सिडिसीका अनुसार मुटुजन्य रोगका कारण अमेरिकामा २०१६ देखि २०१७ सम्ममा ३ खर्ब ६३ अर्ब डलर खर्च भएको थियो। बेलायतमा भने बर्सेनि १ लाख ६० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। जुन दैनिक ४६० र हरेक ३ मिनेटमा एक जना रहने गरेको छ ।
के हाे हृदयघात?
मुटुको रगतको नसा ब्लक भई हुने रोग हार्टअट्याक अथवा हृदयघात हो। हृदयघात हुँदा मुटुको रगतको नली साँघुरिन गई १०० प्रतिशत ब्लक हुने गर्दछ। त्यतिबेला बिरामीलाई एकदम जोडले छाती दुख्ने, खलखली पसिना आउने गर्दछ। यदि कसैलाई एक्कासी यस्तो समस्या भए तुरुन्त नजिकैको अस्पताल लैजानु उत्तम हुन्छ।
एन्जियोप्लाष्टिको अर्को राम्रो पक्ष के हो भने हृदयघात हुनुअघि शंकास्पद बिरामीको एन्जियोग्राफी गरी हेर्ने र यदि गम्भीर अवस्थामा छ भने बेलैमा एन्जियोप्लाष्टि गरी हृदयघात हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
यो रोग साधारणतया बढी उमेर भएकालाई देखिने गरेको छ। तर, हिजोआज कम उमेरका युवालाई पनि देखिन थालेको छ। यसको प्रमुख कारण चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थ तथा लागुऔषधको सेवन नै हो। यस्ता पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिलाई जुनै उमेरमा पनि हृदयघात हुनसक्छ।
सामान्यतः १७/१८ वर्षका युवालाई कहिले पनि हृदयघात हुँदैन। त्यस्तै, जन्मदै जीन (वंशाणु) मा खराबी छ भने रगत बाक्लो हुने कारणले पनि हृदयघात हुनसक्छ। योसँगै सुगरको बिरामी, किड्नीका बिरामी, कोलेस्ट्रोल बढेका बिरामी, थाइरोइड, प्रेसरका बिरामीहरुलाई पनि हृदयघात हुने सम्भावना उत्तिकै बढी हुन्छ।
त्यस्तै, रक्तचाप भएका व्यक्तिहरुमा झन् हृदयघात हुने सम्भावना हुन्छ। रक्तचाप भएको थाहा भएर पनि औषधि नखाने तथा लापरबाही गर्ने मानिसलाई मुटुभित्र समस्या हुनसक्छ।
प्याकेटमा राखिएको खानेकुरामा पछिसम्म खान मिल्ने गरी केमिकल राखिएको हुन्छ, जुन मुटुलाई नकारात्मक असर पार्दछ।